ဤသည်ကိုရပ်တန့်, တစ် ဦး သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာမဟုတ်ပါဘူး | Martech Zone
ဤသည်ကိုရပ်တန့်, တစ် ဦး သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာမဟုတ်ပါဘူး
စနေနေ့, ဇူလိုင်လ 22, 2017 တနင်္လာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 18, 2021 Douglas Karr
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ဆူညံသံများလွန်းသဖြင့်ဆက်လုပ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းတွင်ကြီးမားသောအောက်ပါအချက်များရှိသည်ကိုနှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်တောင်းခံသူတိုင်းကိုထိတွေ့ဆက်ဆံရန်နှင့်တုံ့ပြန်ရန်ကြိုးစားသည်။ ငါအရင်ကဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ရင်ငါအထူးသဖြင့်အချိန်ယူပြီးတုန့်ပြန်ပါတယ်။
သူကပြောခဲ့သည်မှာအွန်လိုင်းပေါ်ထွက်လာမှုစတင်နေပြီဖြစ်သောကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောနည်းဗျူဟာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ပစ်မှတ်ထားသောမက်ဆေ့ခ်ျများ၌ကျွန်ုပ်၏အချိန်ကိုစားသုံးနေသော ကျွန်ုပ်တုိ့၏ပရိသတ်နှင့်မျှဝေရန်ကုမ္ပဏီများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ကြိုက်တောင်းဆိုမှုများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းထုတ်ဝေသည်။ သူတို့သည်အလိုအလျှောက်ဖြစ်စေ၊ လက်ဖြင့်ဖြစ်စေခွဲထားခြင်းရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်သူတို့သည်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည် - ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုသူတို့အားအသိပေးပါလိမ့်မည်။
ဒီမှာဥပမာတစ်ခုကြည့်ပါ။ ငါသည်လည်းတိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်ကွဲပြားခြားနားသောကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ဤတစ်တန်ရပါတယ်။ ပရိသတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့မကြာခဏဆက်သွယ်ကြတဲ့အတွက်အေဂျင်စီရဲ့နာမည်ကိုငါဖျက်လိုက်တယ်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ tweet; သို့သော်ထိုသတင်းစကားများထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ငါ Snapchat အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်၊ Snapchat အကြောင်းဘယ်သူမှအကြံဥာဏ်မတောင်းခဲ့ဘူး၊ Snapchat's အကြောင်းကိုငါဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး နောက်ဆုံးပေါ်အင်္ဂါရပ်.
ဤသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်တိုက်ရိုက်အာရုံစူးစိုက်မှု grabber ဖြစ်ပါသည်, ငါ့အခြားအလုပ်ကနေငါ့အာရုံကိုယူ။ အီးမေးလ်ကွင်းများထဲမှတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်လိုအပ်သည့်အတိုင်းတုံ့ပြန်ရန် (သို့) ဖျက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤတွင် (လက်တွေ့) နှိုင်းယှဉ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်:
ဇာတ်ညွှန်းက - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စားပွဲခုံတွင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်အီးမေးလ်အမြောက်အများပေါ်ထွက်လာသည်။ အသံနှင့်အတူဖောက်သည်များနှင့်အလားအလာရှိသောအခြားစာတိုများလည်းရှိသည်။ ပို့သူတစ်ယောက်မှကျွန်တော့်ကိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်မည်ဟုမမျှော်လင့်ပါ။ ငါအီးမေးလ်ကိုစစ်ဆေးရန်အခွင့်အလမ်းရတဲ့အခါ, ငါကသူတို့ကိုစစ်ဆေးနှင့်အညီတုံ့ပြန်ကြသည်။
အခြေအနေ B: ငါစားပွဲခုံမှာထိုင်နေတယ်၊ ​​မင်းငါ့ကိုနှောင့်ယှက်တယ်၊ ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတစ်ခါမှမပြောခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုငါစိတ်ဝင်စားပါသလားလို့ငါ့ကိုမေးပါ။ အခုတော့ငါ့ကိုနှောင့်ယှက်တဲ့လူအများစုကကျွန်တော့်ရဲ့အချိန်ဟာတန်ဖိုးရှိတယ်၊ သူတို့ကပဲလမ်းလျှောက်မှာမဟုတ်ဘူး။
အကယ်၍ မင်းကဒီဟာခိုင်လုံတဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာလို့ထင်ရင်တစ်နေ့လုံးငါ့ကိုထုတ်ပစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်စေပြီးသင်မှားသွားပြီ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်အချိန်လေးစားပါ အကယ်၍ သင်သည်လူမှုရေးမီဒီယာတွင်ကျွန်ုပ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဆက်သွယ်လိုပါကထိုစကားဝိုင်းကိုကျွန်ုပ်တံခါးဖွင့်သောအခါလုပ်ပါ။ သို့မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအမှတ်အသားမပြုဘဲပုံမှန်သတင်းအဖြစ်သာထုတ်ဝေပါ။
သြဇာလွှမ်းမိုးသူများနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ မင်းဟာငါ့အကျိုးအတွက်ရှာနေတာကိုငါယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။ ငါ့နောက်လိုက်တွေကိုအန္တရာယ်မပေးနိုင်ဘူး။ ဒါ မသြဇာလွှမ်းမိုးမှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာကြောင်း.
Tags: သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလူမှုမီဒီယာtweettwitter စာတို